अनुगमनमा फेला पर्‍यो ६ वर्ष पुरानो चकलेट, ४ वर्ष पुरानो कोल्ड ड्रिक्स « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा बजार अनुगमनका क्रममा वर्षौं पुराना खाद्यवस्तु फेला परेको छन् । चाडपर्व लक्षित गरी आइतबार नगरपालिकाको वडा नं. ५ प्रेमनगर र वडा नं. १० को विजगौरीबाट म्याद गएका सामग्री बरामद गरी नष्ट गरेको छ ।
नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख मिरा चौधरीको नेतृत्वमा भएको अनुगमन टोलीले म्याद नाघेका प्याकेटमा राखिएका पत्रु खाजा (जङ्क फुड), पेय पदार्थ, मसला, तेल, चकलेट, चिप्सलगायतका वस्तु बरामद गरेको हो ।
यसैगरी सन् २०१५ मा उत्पादन भएका चकलेटसमेत जफत गरिएको छ । म्याद नाघेका सेन्टर फिलीज, पावर ब्रान्डका चकलेट, आचिता दालमोठ, सुदूर कम्पनीका बिस्कुटसमेत बरामद गरिएको छ ।
एक वर्षको प्रयोग समय अवधि भए पनि ती चकलेट बिक्रीका लागि सजाएर राखिएका थिए । भारतमा उत्पादन भएका बालबालिका लक्षित गरी उत्पादन भएका प्याकेटमा राखिएका धेरै सामग्री म्याद गुज्रिएका फेला परेका थिए ।
प्रकाशित : २४ आश्विन २०७८, आईतवार १७:३७